KUSHANDA BASA STEEL
HSS CIRCULAR WAKAONA MABASA
3 Zvinhu Zvokufunga Nekusarudza Chishandiso Simbi
Zvinoenderana nekuoma kwavo kwakasarudzika, maturusi ezvishandiso anoshandiswa kugadzira maturusi ekucheka anosanganisira mapanga uye zvibooreso, pamwe nekugadzira inofa setampu uye fomu yesimbi. Kusarudza giredhi resimbi rakanakisa kunoenderana nezvinhu zvakawanda, zvinosanganisira: 1. Magiredhi uye mashandisiro esimbi yesimbi 2. Inoita sei ...
Iyo yakanakisa simbi yepurasitiki jekiseni muforoma tooling
Mainjiniya ane zvakawanda zvezvinhu zvekutarisa kana achinge achishanda epurasitiki jekiseni muforoma yepurojekiti. Nepo paine akawanda eesofemoforming resin yekusarudza kubva, sarudzo zvakare inofanirwa kuitwa pamusoro yesimbi yakanakisa yekushandisa yeiyo jekiseni kuumba chishandiso. Rudzi rwe ...
Classic chishandiso simbi D2
D2 simbi mweya-wakadzima, yakakwira kabhoni, yakakwira-chromium chishandiso simbi. Iyo ine yakakwirira yekupfeka kuramba uye anti-kusakara hunhu. Mushure mekushisa kurapwa, kuomarara kunogona kusvika padanho re55-62HRC, uye inogona kugadziriswa mune yakawedzera state.D2 simbi ine n ...
Maitiro ekusarudza chishandiso simbi yekuumba-kugadzira
General zvido zveturusi simbi Iko kuomarara uye kupfeka kuramba pamwe nekuomarara ndizvo zviviri zvezvinonyanya kukosha pakusarudza chakakodzera simbi simbi. Nekuti hunhu uhu kazhinji hunopesana, pakusarudza kukanganisa kazhinji kunoda kuitwa. Ndisu...
Yekumhanyisa simbi: inoshanda uye inozivikanwa
Zvinoenderana nevemaindasitiri, musika wepasi rose wesimbi yekumhanyisa simbi (HSS) maturusi anotarisirwa kukura kusvika pamadhora gumi bhiriyoni na2020.Jackie Wang-General Manager weShanghai Histar Metal, anotarisa kuti sei HSS ichiramba iri sarudzo inozivikanwa, zvakasiyana nziyo ava ...
DZIDZISO STEEL KUSHANDA NEMAHARA Chii Chinonzi Turu Simbi?
Chii Chinonzi Chishandiso Simbi? Chishandiso simbi rudzi rwekabhoni alloy simbi yakanyatsoenderana yekugadzira maturusi, senge maturusi emaoko kana muchina kufa. Kuomarara kwayo, kuramba abrasion uye kugona kuchengetedza chimiro pakuwedzera tembiricha ndizvo zvakakosha zveichi chinhu. Chishandiso chesimbi chaicho ...
Kukwira kwezvimedu zvinodhura zvinotsigira mitengo yeEuropean rebar
Kukwira kwezvimedu zvemari kunotsigira mitengo yeEuropean rebar Modest, yakakwenenzverwa -mitengo yakakwira yakaitwa nevagadziri ve rebar munyika dzekuMadokero eEurope, mwedzi uno. Kushandiswa neindasitiri yekuvaka inoramba iine hutano. Zvakadaro, kushomeka kwemahara-v ...
Mitengo yesimbi yeEurope Kudzoreredza seKupinza Kunze Kunononoka Vatengi veEurope vezvigadzirwa zvemidziyo zvishoma nezvishoma vakatanga kugamuchira zvishoma kukwidziridzwa kwemutengo wemugayo, pakati / mukupera kwaZvita 2019. Kupera kwechikamu chenguva refu yekuparadza kwakatungamira mukuvandudzwa kweapp ...
Chinese simbi musika kudzoreredza kunoenderera, pakati pehondo dzepasirese Chirwere checoronavirus chakakanganisa misika yesimbi nehupfumi kutenderera pasirese, mukati memwedzi mitanhatu yekutanga ya2020. Hupfumi hweChina hwakanga huri hwekutanga kutambura nemhedzisiro yeCovid-19-Associat ...
3 Zvinhu Zvokufunga nezvazvo Kana Uchisarudza Iyo ...
Yakanakisa simbi yepurasitiki jekiseni muforoma ...
How kusarudza chishandiso simbi For Foroma-Ma ...
Kero: RM 907, NO. 377, JINGAO ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Chishandiso Simbi Flat Bar, Yekumhanyisa Simbi Flat Bar, Denderedzwa Diki Yakaona mashizha, Simbi isina ngura, Stainless Simbi Flat Bar, Sheet isina simbi,